ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း
ကိုယ့်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိလာပြီဆိုရင် ဗေဒင်ဆရာနဲ့ ပြဿနာကို အဖြေရှာချင်ကြသူများအတွက် အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းလေး တစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗေဒင်မေးချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဗေဒင်ဆရာ ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှဘူးဗျ။ ကိုယ်မေးချင်တဲ့ ကိစ္စကို ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကို ရှာရတယ်။ဟောတာ မှန်/မမှန်ကို လည်း စုံစမ်းရသေးတယ်။ နောက်ပြီး ခြောက်လုံးလှန့်လုံးတွေပေး မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး “ယတြာ” နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဆရာလိမ် ၊ ဆရာတုတွေနဲ့ တွေ့မှာလည်း ကြောက်ရသေး သဗျ။
ဟောပြောခ ကတော့ “သဒ္ဓါကြေး” လေးပါ။ ယတြာခကတော့ “သောင်းဂဏန်း ၊ သိန်းဂဏန်း” နဲ့ လုပ်စား နေကြတဲ့ ဆရာတု ၊ ဆရာလိမ်တွေကလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပေါမှ ပေါဘဲ။ ဒီတော့ မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ အသက်မွေးနေကြတဲ့ ဗေဒင်ဆရာတွေ အတွက် ဗေဒင်ပညာနဲ့ အသက်မွေးရတာကိုက မျက်နှာပူစရာ ၊ ရှက်စရာလို ဖြစ်လာပြီ ပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ ပြဿနာ ရှိလာလို့ ဗေဒင်မေးချင်လာရင် ဘယ်ဗေဒင်ဆရာဆီမှ မသွားဘဲ ကိုယ့်အိမ်မှာတင် “ကိုယ်ဘဲ ဗေဒင်မေးသူ ကိုယ်ဘဲ ဗေဒင်ဆရာ” လုပ်ရရင် မကောင်းဘူးလား။
“ဆရာရယ် ကျွန်တော်/ကျွန်မ က ဗေဒင်မှ မတတ်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆရာပြန် လုပ်လို့ ရမှာလဲ” လို့ မေးချင်သေးလား။ ဒီတော့ ရှင်းပြရမှာပေါ့။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂါတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိသားစုတစ်ခုရဲ့ အနာဂါတ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အရာအားလုံးရဲ့ အနာဂါတ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင် သတ်မှတ်ပြီးသားဘဲဗျ။ ဒီလို အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ “ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့” ရှိနေပြီးသားပါ။ ဒါကို ဖော်ထုတ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
ဒီလို အနာဂါတ် လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို -
- တစ်ချို့က “ဂြိုဟ်၊ နက္ခတ်” တွေနဲ့ အဖြေရှာကြတယ်။
- တစ်ချို့က “ကိန်းဂဏန်း” တွေ ပေါင်းနုတ်မြှောက်စားပြီး အဖြေရှာကြတယ်။
- တစ်ချို့က “အိပ်မက်တွေ၊ အတိတ်နိမိတ်” တွေနဲ့ အဖြေရှာကြတယ်။
- တစ်ချို့က “မနောအာရုံ” နဲ့ အဖြေရှာကြတယ်။
- တစ်ချို့က “ကဒ်ပြားလေး” တွေ နဲ့ အဖြေရှာကြတယ်။
- တစ်ချို့ကြပြန်တော့ “ပရလောက” ထဲက ပုဂ္ဂိုဟ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အဖြေရှာကြတယ်။ နည်းလမ်းအဖုံဖုံ ကွဲပြားကြပေမယ့် အားလုံးကတော့ အနာဂါတ်ကို အဖြေရှာကြတာပါဘဲ။
ဒီတော့ ဒီလို အဖြေရှာတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက အထက်က ပြောခဲ့သလို အလွယ်ဆုံး၊ အသက်သာဆုံးလည်းဖြစ် ၊ ကုန်ကျ စားရိတ် လည်း မရှိ ၊ အလိမ်ခံရမှာလည်း မပူရတဲ့ နည်းလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။
- အဲဒါကတော့ “စာချ” တဲ့ နည်းပါဘဲ။
“စာချ” တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သူတွေ ကြားဘူးကြ/ လုပ်ဘူးကြမှာပါ။ တရုတ်ဘုံကျောင်း တစ်ချို့မှာ “စာချ” တယ်ဆိုပြီး “တုတ်ချောင်း” လေးတွေ ထည့်ထားတဲ့ ဗူးကို ဆက်တိုက် အပေါ်အောက် လှုပ်ပေးတဲ့အခါ တုတ်ချောင်းတစ်ခုတက်လာပြီး အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားမယ်။ အဲဒီ ပြုတ်ကျ သွားတဲ့ တုတ်ချောင်းကို ယူ ၊ တုတ်ချောင်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ နံပါတ်နဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ဗေဒင်စာအုပ်ထဲက နံပါတ်ရှိတဲ့ စာမျက်နှာ နဲ့ တိုက်ကြည့်။ ကိုယ်သိလိုတဲ့ အနာဂါတ် အဖြေတစ်ခု ထွက်လာတာပါဘဲ။
တရုတ်လူမျိုး အများအပြားကတော့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို လုပ်တော့မယ်ဆိုတိုင်း “စာချ” ကြည့်ကြပြီးမှ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာ များပါတယ်။ စာချတဲ့ နည်းဟာ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ယိချင်း” ဗေဒင်ပညာရဲ့ နည်းစနစ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် “စာချ” ကြည့်ကြမယ်။ တရုတ်ဗေဒင်လို “တုတ်ချောင်း” တွေ ၊ “စာအုပ်တွေ” ရှိစရာမလိုပါဘူး။ “ယိချင်း” တို့ ၊ “ယင်” တို့ ၊ “ယန်” တို့ ၊ “ပါ့ကွ” ၊ “ဘုတ်ကြီး(၅)ပါး” တို့ကိုလည်း နားလည်စရာ မလိုပါဘူး။
ခင်ဗျား ဘာသိချင်သလဲသာ အရင်ပြော။ သိပ်သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုခုပေါ့။ ဥပမာ- “မောင်နီ နဲ့ မောင်ဖြူ ဘယ်သူနဲ့ လက်ထပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ် ဆိုပါစို့။
ကဲ - စ, လုပ်ကြမယ်။
မျဉ်းကြောင်းမပါတဲ့ စာရွက်အဖြူ တစ်ရွက်ကိုယူပြီး အဲဒီစာရွက်ကနေ(၂) လက်မ ပတ်လည်လောက် တိတိကျကျ ဖြတ်ထားတဲ့ စာရွက်ကလေး (၃)ရွက်ကို အရင်လုပ်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး ပထမစာရွက်မှာ ရေးချလိုက် ။ မောင်နီ နဲ့ လက်ထပ်ရင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ် . . . လို့ ရေး။ ဒုတိယ စာရွက်မှာ မောင်ဖြူနဲ့ လက်ထပ်ရင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ် . . . လို့ ရေး။ တတိယ စာရွက်မှာ ဘာမှ မရေးဘဲထား။ ပြီးရင် စာရွက်တွေ အားလုံးကို တိတိကျကျ “မဲလိပ်” ဖြစ်သွားအောင် လိပ်လိုက်။ ပြီးရင် သန့်ရှင်းတဲ့ ဗူး ၊ ခွက်တစ်ခုထဲမှာ အားလုံးကိုထည့်။ ဘုရားစင်ရှေ့ကိုသွားပြီး “မှန်ကန်သော အဖြေကျပါစေ” လို့ ဆုတောင်း။ (စကားဖြတ် ပြောရဦးမယ် ၊ ဘုရားကို ဗေဒင်မေးတယ်လို့တော့ သွားမလုပ်လိုက်နဲ့နော်။ မြင့်မြတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ဖို့က လိုရင်းဖြစ်တယ် ၊ အမှန်ကတော့ ဘယ်နေရာမှာ လုပ်လုပ် ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်သာထဲ လုပ်တာနဲ့ ဘုရားစင်ရှေ့လုပ်တာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ)
ဆုတောင်းပြီးရင် စာလိပ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ဗူးအ၀ကို လက်နဲ့ ပိတ်ပြီး အထက်အောက် အခါ (၉)ကြိမ်တိတိ လှုပ်ပြီး အထဲက စာလိပ်တစ်လိပ်ကို နှိုက်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒါ ခင်ဗျား သိချင်တဲ့ အဖြေပါဘဲ။ မောင်နီ နဲ့ သင့်ရင် မောင်နီ ထွက်လာမယ်။ မောင်ဖြူ နဲ့ သင့်ရင် မောင်ဖြူ ထွက်လာမယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ မသင့်ရင် စာရွက်အလွတ် ထွက်လာမယ်။
မလွယ်ဘူးလား။ ဒီထက် လွယ်တာတော့ မရှိတော့ဘူး။ ကလေး ကစားစရာလောက်ဘဲ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေး ကစား စရာလို့ ထင်ရင် ကလေးကစားစရာဘဲ ဖြစ်သွားမယ်။ တကယ်ယုံကြည်ရင် တစ်ကယ်မှန်မယ်။
ဒီလို နည်းလမ်းနဲ့ -
- ဒီနှစ်ထဲမှာ နိုင်ငံခြားထွက်ရင် ဟိုမှာ အဆင်ပြေမလား ၊ မပြေဘူးလား . . . ဆိုတာမျိုး။
- ဒီလူ့ကို ငွေချေးလိုက်ရင် ပြန်ရမလား ၊ မရဘူးလားဆိုတာမျိုး။
- လက်ရှိ အလုပ်ကနေ နောက်အလုပ်ကို ပြောင်းလိုက်ရင် ကောင်းမလား ၊ မကောင်းဘူးလား ဆိုတာမျိုး။
- အခုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ ပြီးသွားမလား ၊ ပြဿနာ ပိုကြီးလာမလား ဆိုတာမျိုး။
- အခု ကြည့်ထားတဲ့ အိမ် ၊ တိုက်ခန်း ၊ မြေကွက်တွေကို ၀ယ်သင့်မ၀ယ်သင့် ဆိုတာမျိုးတွေကို ကိုယ် ဉာဏ်သွားရင် သွားသလို မေးနိုင်ပါတယ်။
မေးတဲ့ အခါတိုင်း မေးခွန်း (၂) နဲ့ စာရွက် အလွတ်တစ်ခု အမြဲပါရပါမယ်။ စာရွက်အလွတ်ကျရင် အခုကိစ္စဟာ မေးပုံမေးနည်း မမှန်ကန်တာကြောင့် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခုလောလောဆယ် အချိန်မကျသေးတဲ့အခါမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ နောက်(၃)ရက် (၄)ရက် ခွာပြီး ပြန်မေးရပါမယ်။
“လုပ်ရတာ လွယ်တယ်ကွ” ဆိုပြီး ခဏခဏ မေးလို့တော့ မရဘူးနော်။ တစ်ရက်ကို မေးခွန်းတစ်ခုဘဲ မေးခွင့် ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မေးခွန်းတစ်ခုက ဆက်တိုက်မေးဖို့ လိုတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - သူနဲ့ လက်ထပ်ရင် ကောင်း/မကောင်း ကို မေးကြည့်တာ ကောင်းတယ်လို့ အဖြေထွက်တယ်ဆိုပါစို့။ ဆက်ပြီး သိချင်တာက “ဒီနှစ်ထဲမှာ လက်ထပ်ရင် ကောင်းလား ၊ နောင်နှစ်မှာ မှ ကောင်းမလား” ဆိုတာ ဆက်မေးချင်ပေမယ့် “အောင့်” ထားပါ။ နောက်နေ့မှ ဆက်မေးပါ။ “လေးလေးနက်နက် သဘောထားမှ လေးလေးနက်နက် ဖြစ်ပါမယ်” ။ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ် လုပ်ရင် ပေါ့သွပ်သွပ်ဘဲ ဖြစ်သွားပါမယ်။
ကဲ ဒါကတော့ ကိုယ်ဘဲဗေဒင်ဆရာ ၊ ကိုယ်ဘဲ ဗေဒင်မေးသူ ဖြစ်တဲ့ အလွယ်ဆုံး ကိုယ်တိုင် “စာချ” နည်းပါဘဲ။ ဘယ် ဘုံကျောင်း ၊ ဘုရားကျောင်းမှ သွားဖို့ မလိုတဲ့ နည်းပေါ့။ သွယ်ဝိုက်ပြီး အဖြေရှာစရာ မလိုဘဲ ကိုယ်သိချင်တာကို တိုက်ရိုက် သိနိုင်တဲ့ နည်းပေါ့။ လက်တွေ့ သုံးကြည့် ။ မှန်/မမှန် အမြန်ဆုံး သိနိုင်တဲ့ နည်းတစ်ခုခုနဲ့ စမ်းကြည့်။ မှန်/မမှန် လက်တွေ့ သိလိမ့်မယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရဦးမယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ “လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင်” ဗေဒင် အခန်းကဏ္ဍမှာ လူတစ်ယောက် ကွန်းမန့်ဝင်ရေးသွားဘူးပါတယ်။
ဆရာ့ဟာက မွေးသက္ကရာဇ်တွေမပါတော့ “မဲလိပ်နှိုက်သလို” ကျချင်ရာ ကျသလို ဖြစ်နေတာပေါ့ တဲ့။ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ပြန်ဖြေ လိုက်ပါမယ်။ ကံစမ်းမဲဖောက်တဲ့ ပွဲတစ်ခုမှာ “ပထမ” ဆု မဲလိပ်ကို နှိုက်မိသွားတဲ့သူဟာ (ရမ်းသမ်းပြီး နှိုက်လိုက်တာ မှန်ပေမယ့်) ကံကောင်းမယ့် သူမို့ ဒီမဲလိပ်ကို ရသွားတာ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ ကံမကောင်းမယ့်လူက ဒီမဲလိပ်ကို နှိုက်မိနိုင်ပါ့မလား။ မဲပေါက်ဖို့ကံ လုံးဝမရှိတဲ့လူက ပထမဆု မဲလိပ်ကို ဘယ်လိုနှိုက်နှိုက် မရနိုင်ပါဘူး။ နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။
အရာအားလုံးဟာ သူ့ဟာနဲ့သူ အနာဂါတ် အဖြေရှိပြီးသားပါ။ ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ကြိုတင် သတ်မှတ်ပြီးသားပါ။ ဒါကို နည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ ဖော်ထုတ်ကြတာပါဘဲ။ တစ်ချို့နည်းလမ်းတွေက ခက်ခဲတယ်။ တစ်ချို့လွယ်ကူတယ်။ လွယ်လွယ် / ခက်ခက် အဖြေမှန်ရဖို့က လိုရင်းပါ။
pm Sunday, July 21, 2013 Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်